ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals 14.18.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 14.18.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ZEE5 မှာကျနော်တို့အသကျရှငျလာဖျော်ဖြေရေးအဘို့, သင်ကခံစားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်ကြသည်! 12 Navigator & အသားပေးဘာသာစကားများတီဗွီရှိုးများဖြတ်ပြီး, ရုပ်ရှင်တွေ, မူရင်းက Web စီးရီးနိုင်ငံတကာ Show, ကောင်းချီး Play and အများကြီးပိုအတူ။ နေအိမ်နဲ့တူခံစားရသည့်အတွေ့အကြုံအတွက်သင်တို့၏သက်သာ၏ဘာသာစကားကိုအတွက် 80+ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ 100,000+ နာရီနှင့်အတူန့်အသတ်ဖျော်ဖြေရေးခံစားပါ။
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals အား အခ်က္ျပပါ
v-mart စတိုး 66 24.77k
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 14.18.4
ထုတ်လုပ်သူ Zee Entertainment Enterprises Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.zee5.com/privacypolicy
Release date: 2019-01-18 13:13:23
လက်မှတ် SHA1: 22:3C:73:66:3F:2C:8C:78:E9:49:BD:47:3B:B2:52:C0:5D:9A:29:17
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Dance India Dance
အဖွဲ့အစည်း (O): Dance India Dance
နယ်မြေ (L): Mumbai
ZEE5 - Movies, TV Shows, LIVE TV & Originals APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ